कसरी शिकागो क्यानाबिस वकिलले तपाईंलाई व्यवसाय सुरु गर्न मद्दत गर्दछ?
शिकागो मा भांग वकील
कसरी शिकागो मा एक भांग वकील तपाईं एक भांग व्यवसाय शुरू गर्न मद्दत गर्न सक्छ
तपाईं एक देख रहे भने शिकागो भांग वकील, तपाईं सही ठाउँमा आउनु भएको छ। यस लेखमा, हामी एक शिकागो क्यानाबिस वकील क्यानाबिस व्यवसाय मा कवर सबै पक्षहरू प्रकट गर्छौं। नियमहरूको पालना कसरी गर्ने र कसरी व्यापार मालिकको रूपमा सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
राम्रो शिकागो भांग वकील तपाईंलाई जोखिम कम गर्न र प्रभावकारी व्यावसायिक अपरेशनहरूको समय लामो गर्न मद्दत गर्दछ।
इलिनोइस क्यानाबिस कानूनको पालना
एक शिकागो भांग वकील एक आधिकारिक व्यक्ति हो जसले तपाईंलाई इलिनोइस क्यानाबिस कानूनको पालनामा मद्दत गर्न सक्छ। इलिनोइसमा जनवरी १, २०२० देखि मनोरञ्जनात्मक गाँजाको खरीद कानूनी हुनेछ, र यो भांग उद्योगमा ठूलो परिवर्तनको लागि समय हो। वैध मेडिकल भांग बिरामी आईडी कार्ड भएका प्रयोगकर्ताहरूले मेडिकल गाँजा खरीद गर्न सक्नेछन् र अन्य सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई मनोरन्जनका लागि गाँजा किन्न अनुमति दिइनेछ।
व्यवसायहरू जुन औषधालयहरूको रूपमा दर्ता भएका छन् ग्राहकहरूको जानकारी प्रमाणित गर्न विकल्प हुनेछ विशेष प्रकारका कोभाको आईडी स्क्यानरहरूको प्रयोग गरेर। यी स्क्यानरहरूको साथ, ग्राहक अनुभव द्रुत चेक इन प्रक्रिया र सिमलेस लेनदेनको लागि धेरै उत्तम धन्यवाद हुनेछ। खरीद सीमा भांग फूलहरूको २ औंस छ। यो १ 2.5 दिनमा २. औन्सको रकम खरीद गर्न सम्भव छ।
इलिनोइसमा भांग नियमहरूमा अर्को नियम क्यानाबिस-संचार उत्पादहरूमा THC को रकम हो। यी उत्पादनहरूमा THC को 500०० मिलिग्राम भन्दा बढी अनुमति दिईने छैन। स्वचालित खरीद सीमा सतर्कताहरूले खुद्रा विक्रेताहरूलाई बिरामी र ग्राहकहरूलाई ओपेलसेलिंग रोक्न अनुमति दिनेछ जुन खरीद सीमामा पुगिसकेका छ यस मामलामा इलिनोइस राज्यका अधिकारीहरू मेडिकल मारिजुआनाको बढी बिक्री र उपभोग घटाउन चाहन्छन्।
इलिनोइसमा क्यानाबिस खुद्रा विक्रेताहरू नियमहरूको पालना गर्न चाहन्छन्, र उनीहरूले निम्न कार्यहरू ट्र्याक गर्छन्:
शुरू र अन्वेषण अन्वेषण
रिपोर्टि fully पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन्छ किनकि कोभा स्क्यानरहरू इलिनोइसको राज्यव्यापी प्रमाणिकरण प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा एकीकृत छन्। सूची नियन्त्रण र बिक्री प्रणाली प्रणाली वेब-आधारित र कुनै पनि समय राज्य द्वारा पहुँचयोग्य हो। कोवा प्रणालीले आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ जब यो इन्भेन्टरी नियन्त्रणको कुरा आउँदछ जुन नाबालिगको हातबाट टाढा राख्नको लागि आवश्यक शर्त हो। एकै साथ उत्पादहरू कालो बजार र अवैध गतिविधिहरूबाट सुरक्षित छन्।
क्यानाबिस व्यापारको साथ अनुबन्ध र अपरेशनहरू
शिकागो क्यानाबिस वकिलले तपाईंलाई ठेका शिल्प बनाउन मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको व्यवसाय परिचालनमा सान्दर्भिक छ। सहि करारहरूमा तपाईले प्रत्येक पार्टीको नियम र दायित्व परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक विवरणलाई ठूलो ध्यान दिएर, शिकागो क्यानाबिस वकीलले निम्न सम्झौताहरू परिभाषित गर्न सक्दछ:
निगमन वा संगठन को लेख
आन्तरिक शासन सम्झौता
यी सबै सम्झौताहरू तपाईंको व्यवसाय अधिकार र सम्पत्तीलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न बनेका छन्। प्रत्येक कागजात परिभाषित गर्दछ कि कसरी तपाईं विशिष्ट व्यापार स्थितिको बेलामा तपाईंको व्यवसाय एकाइसँग अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। इलिनोइस नियम र नियमहरूको पालना समग्र सम्झौता प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शिकागो क्यानाबिस वकिलले सम्झौताहरू प्रयोग गर्न र बुझ्न सजिलो बनाउँदछ ताकि सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरूसँग तपाईंलाई परिचय गराउन सकिन्छ।
यसबाहेक उल्लेख गरिएको सम्झौता, तपाईंलाई कागजातहरू पनि आवश्यक पर्न सक्छ जुन तपाईंको व्यवसायलाई विस्तृत रूपमा परिभाषित गर्दछ। यस मामला मा, तपाईं एक रोजगार सम्झौता हुन आवश्यक छ कि कर्मचारिको सीमितता र नियमहरु लाई मान्यता दिन्छ। अर्को सान्दर्भिक कागजात स्टक खरीद सम्झौता हो जसले बिक्री स्टक वा कम्पनीमा स्वामित्वको अन्य प्रकारहरू परिभाषित गर्दछ। तेस्रो कागजात व्यापार योजनाको रूपमा आउँदछ। यो कागजातले भांग व्यवसाय योजनालाई परिभाषित गर्दछ जुन विभिन्न बिभिन्न प्रकारहरूमा कार्यान्वयन गर्दछ। यी सबै कागजातहरू शिल्प गर्न, तपाईंलाई तपाईंको शिकागो क्यानाबिस वकीलसँग थप परामर्शहरू आवश्यक पर्दछ।
क्यानाबिस इजाजत पत्र मामिलाहरूको साथ इलिनोइस राज्यको साथ अन्तर्क्रिया
इलिनोइस राज्य संग कुराकानी विभिन्न पक्षहरुमा महत्त्वपूर्ण छ। सबै व्यवसाय मालिकहरू जो इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहान्छन् आधिकारिक नियमहरूको पालना गर्नै पर्दछ। इजाजतपत्रहरूको लागि मुख्य प्रकारका अनुप्रयोगहरूलाई अत्यन्त विशिष्ट विवरणहरू आवश्यक पर्दछ। तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी, आपराधिक पृष्ठभूमि जाँच, विशिष्ट भांग व्यवसायको लागि व्यवसाय योजना, र निर्दिष्ट इजाजतपत्रको लागि समग्र आवेदन शुल्क प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ।
यस्तो अवस्थामा जब तपाईं मेडिकल मारिजुआना औषधालय इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले fee 30,000 को आवेदन शुल्क तिर्नु पर्नेछ जुन इलिनोइस राज्यमा आधिकारिक शुल्क हो। यदि तपाईंले औषधालय इजाजतपत्र प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं भ्यागुता उत्पादनहरू २१ बर्ष वा माथिका वयस्कहरूलाई बेच्न सक्नुहुनेछ। यो जनवरी १, २०२० देखि सम्भव हुनेछ।
आवेदन विशेष स्कोरि system प्रणालीको आधारमा राखिनेछ, र आवेदकहरूले थाहा पाउनेछन् कि मे १, २०२० मा उनीहरू स्वीकार्य छन्। 1 2020 सम्म सशर्त इजाजत पत्र जारी गरिनेछ र सशर्त लाइसेन्स पाउने आवेदकहरूको लागि उपयुक्त स्थान खोज्न १ 75० दिन हुनेछ। भांग बेच्दै। स्थान विभाग अधिकारीहरु द्वारा स्वीकृत हुनु पर्छ।
इलिनोइसमा क्यानाबिस इजाजतपत्रको जिम्मा लिने आधिकारिक एजेन्सी भनेको इलिनोइस फाइनान्सियल एण्ड प्रोफेशनल रेगुलेसन (आईडीएफपीआर) हो।
घर जग्गा र क्षेत्र समस्याहरूको साथ मद्दत गर्दै
इलिनोइसमा, २०२० देखि राज्यको केहि जोनहरुमा भांग उब्जाउने र बेच्न कानूनी हुनेछ। आधिकारिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न तपाईले शिकागो क्यानाबिस वकिलसँग परामर्श लिनु पर्छ जसले भोज व्यवसायका लागि कुन क्षेत्रहरू उपलब्ध छन् र तपाईले कसरी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ। नियमहरु।
यदि तपाईं भांगको कारोबार सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र घर जग्गा किन्न चाहनुहुन्छ भने, सम्भव विकल्पहरूको बारेमा तपाईंको वकीललाई परामर्श लिन राम्रो हुन्छ। इलिनोइसमा भांगको कारोबार शुरू गर्नु भनेको शिकागो क्यानाबिस वकिलको सहयोगमा सजिलो छ। तपाईं राज्यमा सुरू गर्न के संभव छ हेर्नको लागि सक्षम हुनुहुनेछ र सही इजाजतपत्रले कसरी फरक पार्छ। एक राम्रो योजना र पेशेवर शिकागो वकील संग, तपाईं इलिनोइस राज्य मा वृद्धि को लागी एक ठूलो परिप्रेक्ष्य संग सबै भन्दा प्रभावी भांग व्यापार संग अवसर छ।